मरेर बाँचे, अहिले बाँचेर मर्दैछु’ऋषिराम खनालका कहालीलाग्दा संस्मरण हुन — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » साहित्य → मरेर बाँचे, अहिले बाँचेर मर्दैछु’ऋषिराम खनालका कहालीलाग्दा संस्मरण हुन
मरेर बाँचे, अहिले बाँचेर मर्दैछु’ऋषिराम खनालका कहालीलाग्दा संस्मरण हुन
April 24, 2016१७२ पटक
अन्तिम अवस्थामा बाच्नका लागि मान्छेले जे पनि गर्नु पर्दोरहेछ । मैले पनि बाच्नकै लागि सबै प्रयास गरे । मेरा अगाडि दुईवटा लाश थिए, जससँग विहानसम्म एउटै कोठामा संगै बसेको थिएँ । साथीहरु मर्दा, म किन मरिन ? च्यापिएका समयमा मैले धेरै पटक यस्तो सोचें ।’
घरमा भएका सोझा बा, आमा ,श्रीमती र आठ महिनाको छोरालाई यति संझिए कि उनीहरुकै सम्झना र विछोडमा आँसुको भेल बगाए । जब आँसु सकिए अनि आवज पनि बन्द हुन थाल्यो । घाटी सुक्यो । मैले काल पुकार्न थालें ।’ गत बैशाख १२ को बिनाशकारी भूकम्पमा परेर ८२ घण्टा पछि उद्धार गरिएका ऋषिराम खनालका कहालीलाग्दा संस्मरण हुन यी ।
घरको चरम गरिबीका कारण ऋषिरामले पढ्न पाएनन् । सानै देखि भारतमा कमाउन गए । सुरुमा १५ सयबाट काम गर्न,थालेका उनले ५ हजार सम्म महिनाको कमाउन थालेका थिए । सबै खाडीमुलुक जान थाले पछि उनी पनि महिनाको २० हजार कमाउने सपना बोकेर डेढ वर्ष देखि कतार जाने प्रयासमा लागे । ऋषिरामको यस पटकको प्रयासले भिसा लाग्यो । त्यही भिसा उनको जीवनको अभिषाप बन्न पुग्यो ।
घरबाट बैशाख ८ गते हिंड्दा आमाले ‘पूर्वको साईत राम्रो छैन् , होस् गरेर जानु बाबु’ भनेको उनले ८२ घण्टामा ८२ करोड पटक सम्झिए । १० गते कतारका लागि उनले नेपाल छोड्नु थियो । म्यानपावर कम्पनीसम्म लगेर भिसा मिलाइदिने गाउँले दाइ धनिराम भूसालले ‘१० गते फ्लाइट छ तुरुन्त आउनु ’भनेर बोलाएका थिए ।
‘टाढा जाँदै छु भन्ने मनमा लागेर हो कि ! आमा, बा र सानो छोरा अनि श्रीमतीको अ‍ैद्यी माया लागेर आयो घर छोड्नु अघि । मनमा उत्साह पटक्कै थिएन् । लामो कसरत पछि आएको भिसा छोड्न मिलेन । छोडेर के गर्ने ? भारतमा गएर कमाएको पैसाले घरमा चिया खान पुग्दैन थियो । महिनाको २० हजार मेरा लागि धेरै ठूलो पैसा थियो । मैले कतारका लागि मंगलबार विहान घर छोडर हिडें,’ ऋषिरामले भने ।
बुधबार विहान छ बजे नै काठमाडौ आईपुगे । काठमाडौमा चिनेको र आफ्नो भन्ने धनिराम दाइ थिए । चक्रपथमा भेटेर उनीसंगै स्काई म्यानपावर कम्पनीमा गए, उनी । म्यानपावरले ‘फ्लाइट’ रद्ध भएको बताउदै गंगबुको सयपत्री गेष्ट हाउसमा ऋषिरामलाई बस्न पठायो ।पाँच तल्ले गेष्ट हाउसको दोस्रो तल्लामा उनी जस्तै फ्लाइट रद्ध भएकाहरुका बीचमा पुगे । सबै अपरिचित आफूजस्तै गरिबीको मार खेपेका निरीह युवाहरु देखेपछि दुःखको भागीदार आफूमात्र रहेनछु भन्ने उनलाई लाग्यो । सामूहिक कोठाको एउटा खाट समातेर उनी सयपत्रीमा वस्न थाले । त्यही घर कतिलाई काल बन्यो र ऋषिरामलाई अभिषाप ।
झण्डै चार दिनसम्म एउटै कोठामा संगै वसेका हामीहरुका बीच कुनै आत्मीय सम्बन्ध हुन सकेन । विभिन्न ठाउँबाट आएकाहरुलाई मेनपावर कम्पनीले संयुक्त कोठामा सुताएको थियो । तराईका केही साथीहरु थिए । उनीहरु आपसमै रमाएका थिए । पुरानो चिनजान भएका साथीहरु म संग कोही थिएनन् । सबै आफ्नै धुनमा थिए । म पनि त्यस्तै । खासै कसैसंग परिचय भएको थिएन ।
बैशाख १२ गते खाना खाएर कोठामै बसिरहेको थिए । मसंगै अरु दुई जना पनि थिए । अरु भने बाहिर बजार घुम्न निस्किएका थिए । बसिरहेका बेला एक्कासी घर घुम्न थाल्यो । भूकम्प आयो भन्दै भाग्न थाल्यौ । माथि बाट ३ तल्ला हामी माथि खस्यो । मेरा अगाडि दुई जना थिए । एक जनालाई छतले च्याप्यो केही समय लामो सास फेर्दै थिए । करिब २० मिनेट पछि उनको आवाज बन्द भयो । उनी मरे भन्ने लाग्यो । अर्को साथी तपाई चिच्याउनुस् , म पनि चिच्याउँछु , कसैले हाम्रो उद्धार गर्न सक्छ । मलाई चिच्याउन उकासिरहेका थिए । हामी दुवै जना रुनेकराउने गरिरहेयौँ । करिब दुई घण्टा पछि त, उनी पनि बोल्न छोडे । मैले पटक–पटक साथी–साथी भनेर बोलाए । कुनै आवाज आएन । अध्यारो सिवाय केही थिएन हात तन्काउदा उनलाई छुन सक्थे तर देख्दिनथे । उनी पनि मरे भन्ने लाग्यो ।” बैशाख १२ को मध्यदिनको त्यो कहाली लाग्दो घटना सुनाउँदा–सुनाउदै ऋषिरामका आँखा आँसुले भरिए ।
‘हेर्नुस् न रुदा– रुदा मेरा आँसु सिद्धिएका थिए ,फेरि भरिन थालेछन’ मधुरो हाँसो अनुहारमा ल्याउने प्रयास गर्दै थिए ,उनी । साथमा रहेकी १९ वर्षीया श्रीमती कविता खनालका गालाबाट आँसुका भल मग्न थालिसकेका थिए । ‘भाग्दा–भाग्दै कसो–कसो म कुनाको चेपमा परेछु । ठूलो ढलानले मेरो खुट्टा च्याप्यो । तान्ने प्रयास गरे , सकिन । बा, आमा,छोरा र श्रीमतीलाई लाख पटक संझिए । त्यति नै पटक मृत्यु पनि संझिए,’ ऋषिरामले भने ।
‘यस्तो गरेर बाँच्नु भन्दा मर्नु निको लाग्यो । संगैका दुईजना मरिसकेका थिए । विस्तारै उनीहरुको शब गनाउन थालेको थियो । २ दिन सम्म धनिराम दाइलाई बोलाइरहे । म बसेको ठाउँ उहाँलाई थाहा थियो । मेरो खोजीमा आउनुहुन्छ कि भन्ने आश म, मा यति धेरै रह्यो कि, म उहाँलाई मात्र बोलाउन थाले । ‘दुब्लो शरिर, मनिलो अनुहार बोकेका ऋषिरामले पीडाका ती, दिन सम्झदा सुन्नेको आङ्ग काप्ने अवस्था थियो । त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको आँखा कार्डको ४०४ क्याविनको एक छेउमा त्यही नियति बोकेर हामीले ऋषिरामलाई सुनिरह्यौ । घरि उनी रुन खोज्थे घरि हामी । संगै वसेकी श्रीमती कविताका आँखा यसैयसै बघिरहेका थिए । स्तब्ध वातावरणमा ऋषिरामको जीवन सुन्दै थियौँ हामी ।
‘रातदिन छुट्याउन सक्ने अबस्था थिएन । थुलो र गर्मीले ज्यानमा औडाह मात्र थियो । बोली बन्द भइसकेको थियो । आफन्त र प्रियजनहरुलाई सम्झदा मन बटारिएर आउँथ्यो । म निरुपाय थिए । घाँटी सुकेर प्याक– प्याक बनिरहेको थिए । बल्लतल्ल गोजीको रुमाल झिके र रुमालमा पिसाव गरे । अनि त्यही रुमाल चुसेर घाँटी भिजाउने प्रयास गरे । प्राण नगए पछि मान्छेले बाँच्न जस्तो सुकै उपाय गर्दोरहेछ । म पनि त्यही अवस्थामा थिए ।’ उनले भने ।
‘पाँच तलाको भवनमा म दोस्रो तल्लामा थिए । मेरो उद्धार होला भन्ने कल्पना पनि गर्न छोडिसकेको थिएँ मैले । मरेर लडेका दुईजना बरु भाग्यमानी रहेछन् ,जस्तो लागेर आउँथ्यो घरिघरि ।आफ्नो प्राण सुकेरै जाने रहेछ भन्ने लाग्यो ।’ साथमा रहेको ७ महिनाको छोराको अनुहारमा गहिरिएर हेर्दै ऋषिरामले पीडाको चरम रुप बताउदा अबोध बालकमा भिन्न चञ्चलता देखिन्थ्यो ।
बैशाख १५ गते विहानै देखि उनको उद्धारका लागि अन्तर्रा्ष्ट्रिय टोली खटिएको थियो । मान्छे जिवीतै हुनसक्ने भएका कारण उद्धार टोली अति सचेत थियो । साँझ कसैले ढलान फोड्दै गरेको ऋषिरामले चाल पाए । अनि ढुङ्गाले भित्तामा ठोक्न थाले । त्यही आवजका भरमा उनको खुट्टा च्यापिएको ढलान पछ्याए ।
‘खुट्टा चलेको जस्तो लाग्दै थियो । उद्धारकर्मीले खुट्टा चल्छ रु भन्दा चल्छ भने । पहिलो पटक उज्यालो देख्दा मलाई असैह्य भयो । घर फलफनी घुम्यो । मलाई स्टेचरमा राखेर अस्पताल पुर्याउन खोज्दा भूकम्प आयो भनेर म जोडले चिच्याए । घर मान्छे सबै–सबै घुमेकाघुमै मात्र , म अत्तालिए ।’ उनले भने । अस्पतालमा आएर जाँचपड्ताल गरे पछि ऋषिरामले हतारहतार डाक्टरलाई सोधे डाक्टर साहब मेरो खुट्टा के हुन्छ रुतपाईको खुट्टा ठीक छ । डाक्टरको प्रतिउत्तरले उनमा खुशीको सीमा रहेन । चार दिन सम्मका सम्पूर्ण कष्टहरु क्षणभरमै भुले । मनमा शान्ति छायो भुसुक्क निदाएछन् पनि । ‘अप्रेशन थिएटरमा’ लादै गरेको याद त गरे , तर अप्रेशनसंगै खुट्टा काटिएको थाहा पाएनन् । जब घुँडा भन्दा तलको खुट्टा देखेनन् , उनी कहालीएर चिच्याउन थाले ।
‘मलाई पहिलो पटक त कनि बाँचे भन्ने पनि लाग्यो । अर्घाखाँची जस्तो विकट पहाडमा बस्नु छ । यस्तो अवस्थामा । मलाई बाँच्न मन पटक्कै भएन । मर्न पनि त सजिलो थिएन । दुई घण्टासम्म रोए, पछि मैले चित्त बुझाए ।’ ऋषिरामले मनको पीडा सुनाए । अति सामान्य परिवार । घरमा आयस्रोत केही छैन् । ४ दाजुभाइ मध्य एक जना छुट्टिएका छन् । अरु ३ दाजुभाइ र आमा, बासंगै छन् । दाजुभाइहरु विदेश नजाने हो ,भने घरको विजोग हुन्छ । कुनै पनि दाजुभाइले पढेका छैनन् । ऋषिरामले ८ कक्षासम्म पढेर छोडे ।
मेरो अबको चिन्ता यो सानो छोरा र श्रीमती । अरु दाजुभाइ र आमा बा त जेनतेन पालिएलान । मेरो काँधमा आएका यी दुईलाई मैले कसरी पाल्ने होला । अस्पतालमा करिब ६ महिना राखेर डिस्चार्ज गरिदियो । अस्पतालमा वसुञ्जेल त सबै आए, भेटे । माया गरे यहाँबाट गएपछि मैले के गर्ने होला । भगवान । ऋषिरामले यति भनिसक्न नभ्याउदै पत्नी कविता डाँको छोडेर रुन थालिन । संगै ऋषिरामपनि । काखकोे छोरा अतालियो । दुःखले गरिबलाई नै सताउँछ । अब ऋषिरामले बाच्नु पर्छ । सामाजप्रति उनको ठूलो भरोसा छ । ‘दुईचार लाख पैसा भइदिएको भए कवितालाई पसल गर्न लगाउँथे । म पनि काम गर्थे ।’ अनुहारमा थोरै खुशी छर्दै उनले भने । उनका लागि अब सहयोगी हातहरुको खाँचो छ ।
उपचार गरेर घर फर्किंदा काठमाडौं नफर्कने अठोट गरेका ऋषिराम बैशाखी टेकेर उपचारका लागि बेला बेला आइपुग्छन् । उपचार गर्दाको ९० हजार ऋणको बोझ छ उनीमाथि । बैशाखीको साहारामा दौडिदै गरेको अहिले यो जिन्दगी उनलाई सा¥है भारी भइरहेको छ । उनी सम्झन्छन ‘मरेर त बाँचियो तर यतिबेला बाँचेर मर्दैछु ।’प्रसुतुत इमेज खबर बाट